David Leavitt Bio - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Tom Howard
TYPES ENTITY BUSINESS
INFO AN'NY FANJAKANA
David Leavitt - Mpisolovava rongony any Boston
Mpisolovava rongony any Boston, David Leavitt, nahazo alàlana hanao fampiharana lalàna any Massachusetts nandritra ny 20 taona mahery. Amin'ny maha mpisolovava ny fanavaozana rongony dia mino izy fa tokony ho re avokoa ny feo rehetra. Nahazo diplaoma tamin'ny Clark University's Raharaha mifehy ny fifehezana rongony Program ho an'ny mari-pahaizana Master, Leavitt dia niditra an-tsehatra tamin'ny fizotran'ny mpangataka ara-tsosialy ho an'ny fahazoan-dàlana hividianana rongony Massachusetts.
Fandaharam-bola ara-tsosialy komisiona misahana ny rongony Massachusetts (SEP)
Fandaharana ara-teknika fanampiana & fanofanana maimaimpoana
Famerenana ny fampiharana haingana
Ny saram-pitsarana navela
Ny saram-pandraharahana METRC isam-bolana nividy voafitaka
Fidirana manokana amin'ny karazana Fanjifana ara-tsosialy sy fahazoan-dàlana ihany, mandritra ny telo taona farafahakeliny, ary koa fizotry ny fanamarinana mialoha.
Fihenan'ny 50% ny saram-pifidianana isan-taona
Ny fidiram-bola dia tsy mihoatra ny 400% amin'ny fidiram-bolan'ny faritra sy ny toeram-ponenana amin'ny faritra misy fiantraikany tsy mitombina, araka ny famaritan'ny Komisiona, farafahakeliny 5 amin'ny 10 taona lasa.
Fonenana any Massachusetts mandritra ny 12 volana farafahakeliny ary faharesen-dahatra na fitohizan-tany nefa tsy hita ny fandikan-dalàna momba ny zavatra voafehy teo ambanin'ny MGL c. 94C na fanamelohana mitovy amin'izany amin'ny faritra hafa; na
Fonenana ao Massachusetts mandritra ny 12 volana farafahakeliny ary porofo fa ny olona iray dia nanambady na zanaky ny olona voaheloka na maharitra fa tsy nahita ny MGL c. Heloka 94C na fanamelohana mitovy amin'izany amin'ny faritra hafa.
Làlan'ny programa 3
Mpandraharaha ho an'ireo mpandray anjara mitady fahazoan-dàlana amin'ny Marijuana Establishment. (Ny fahazoan-dàlana handefa dia heverina ho Marijuana Establishment)
Ny fampianarana dia misy fa tsy ferana amin'ny:
Fampiharana sy fizarana fahazoan-dàlana;
Fampiroboroboana ny drafi-pandraharahana sy fampiakarana renivohitra;
Fanarahan-dalàna amin'ny asa sy ny asa aorian'ny fahazoan-dàlana; SY
Ny fifanarahana monisipaly momba ny fizotran'ny tanàna sy ny fiaraha-monina.
2. Votoatiny ho an'ny mpandray anjara mitady asa ambony momba ny fitantanana sy ny fahefana mpanatanteraka ao amin'ny Marijuana Establishment.
3. Fandraisana anjara ho an'ny mpandray anjara liana amin'ny asa fidirana ao anatin'ny trano Marijuana izay misy traikefa kely na tsy misy.
Manomboha amin'ny asanao rongony anio ary mifandraisa amin'ny mpisolovava rongony any Boston David Leavitt.
Chicago IL, 60606 Etazonia
Vovonana 100 Dr.
Vonona hampitombo ny orinasa rongony? Raiso ny fanadihadianay haingana hahitanao ny lalanao.
Info momba ny rongony mahasoa
Ento any amin'ny ambaratonga manaraka ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fidirana an-tsokosoko amin'ny mombamomba anay nozaraina tamin'ny mpamandrika ihany.